Sawirro: Rabshado Hareeyay Caleema Saarka Madaxweynaha Kenya oo Ka Dhacay Magaalada Nairobi.
Tuesday November 28, 2017 - 15:50:27 in Wararka by Super Admin
Magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaa maanta ka dhacay munaasabado kala duwan oo ay dhiganayeen kooxaha siyaasadda wadankaasi isku haya.
Karoonka kubadda Cagta Kasaraani waxaa lagu caleema saaray Uhuru Kenyatta oo la sheegay in uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ku celiska ahaa ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha Kenya doorashooyinkaas waxaa hareeyay isqab qabsi.
Tobaneeyo madaxweyne oo ka socda caalamka ayaa goob joog ku ahaa munaasabadda caleema saarka ah waxaana kamid ahaa madaxweynayaasha Uganda,Rwanda iyo R/wasaaraha Yahuudda Ben Yamiin Netenyahu iyo sidoo kale safiirro ka socday caalamka.
Caleema saarkan waxaa hareeyay dibad baxyo rabshada wata oo ay dhigayeen taageerayaasha Xisbiga NASA ee uu hoggaamiyo Railla Odinga, ciidamada booliska ayaa toogtay dhowr qof oo lagu eedeeyay in ay hubeysnaayeen.
Odinga ayaa sheegay in uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee Kenya isagoo taageerayaashiisa usheegay in bisha soo socota ay ka qeyb galaan munaasabad madaxweyne loogu dhaarinayo!.
Ciidamada Booliska oo adeegsanaya sunta dadka ka ilimeysiisa iyo rasaas nool nool ayaa waddooyinka waaweyn ee Nairobi ku eryanayay dibad baxayaasha.